သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးကိတ်မုန့် (တစ်ဆင့်ချင်း) + ဗီဒီယိုကိုအလှဆင်ပုံ - ဘလော့ဂ်
ကိတ်မုန့်တစ်ဆင့်ချင်းစီဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ နှင်းခဲနှင့်ရိုးရှင်းသောအလှဆင်ခြင်းမှသည်
သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိပါ။ ဒီနေ့မင်းရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုအလှဆင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာပြမယ် ကိရိယာများ တစ် ဦး မုန့်ဖုတ် အခြေခံ vanilla ကိတ်မုန့် , ချုံ့ , ချွန်ထက်အနားနှင့်အတူ frosting နှင့်သင်တန်းအလှဆင်!
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး Cake Shopping List ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်
အကြံပြုထားသောကိရိယာများ * မှတ်စု - ဤစာရင်းတွင်သင့်အားမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှမပေးပါသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရောင်းရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့မည့်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ *
သုံး″ ကိတ်မုန့် - ဖုတ်နှင့်အအေး
ငါ့သမီး၏ဆရာမကငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်အကြံပေးချက်များရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းငါ့ကိုတနေ့ငါ့ကိုချဉ်းကပ်သောကြောင့်, ငါသည်ဤ post ကိုမှမှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာသူမ၏အမေ၏မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူမတစ် ဦး ကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်သို့မဟုတ်အလှဆင်ဘယ်တော့မှပေမယ့်တ ဦး တည်းအောင်အပေါ်သူမနှလုံးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမကိုပို့ဖို့အဆက်အသွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ချက်ပြုတ်နည်းတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူမနည်းနည်းလေးပင်ပန်းနေပုံရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာကျမကကိတ်မုန့်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသူ၊ အစကနေအဆုံးအထိဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ခါမှမပြခဲ့ဘူး။
ငါအရမ်းမကြာသေးမီက (2007) ပထမ ဦး ဆုံးကိတ်မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါငါပထမ ဦး ဆုံး box ကိုရောနှောခြင်းနှင့်သံပုရာနှင်းခဲ၏လုပ်နိုင်ခဲ့တက်ယူ။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတကယ်မထင်မှတ်ပါပဲ။ ငါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိခြင်းသတိရပေမယ့်အချိန်, အဘယ်သူမျှမမေးရန်။
ဒီတော့ဒီမှာကနေစပြီးအဆုံးအထိကိတ်မုန့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော့်လမ်းညွှန်ပါ။ သင်အရင်ကကိတ်မုန့်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးရင်တောင်အဲဒါကသင့်အတွက်ရှင်းပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမုန့်ဖုတ်ခြင်းကိုမစတင်မီဤစာမူတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည် ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ tools များနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိသည်ဖို့သေချာနိုင်ပါတယ်။ ငါကိတ်မုန့်ကိုမလိုအပ်ခင်နေ့ကမုန့်ဖုတ်တာကိုကြိုက်တယ်။
တစ်နေ့မှာကိတ်မုန့်ဖုတ်ပြီးအလှဆင်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဒါကကိတ်မုန့်တစ်ခုလုပ်ပြီးပြီးအောင်လုပ်ဖို့အချိန်ကုန်ဖို့ငါ့ရဲ့အခြေခံအချိန်ဖြစ်တယ်။ ငါကတစ်ခုခုမှားယွင်းနေလျှင်, ငါက fix ဖို့အချိန်ရှိသည်ဒါကြောင့်ကြောင့်မတိုင်မီတစ်ရက်ကိတ်မုန့်အပြီးသတ်။ သငျသညျအမိန့်ကိုယူ။ စတင်ရန်ရှာဖွေနေ၌ရှိလျှင် toppers အောင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုဖြေဆိုခြင်းကဲ့သို့အပိုသောအရာတို့ကိုအဘို့အပိုသောအရာတို့ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အချိန်ဇယားအချို့အသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ - ရုံးခန်း၊ ရက်သတ္တပတ်များအမှာစာများကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန်လိုမလိုကိုကြည့်ရန်။ ငါ toppers အပေါ်စတင်ရန်သို့မဟုတ်လုပ် - ရှေ့ဆက်အပိုင်းပိုင်းအပေါ်လိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်အမိန့်ကိုကျော်သွားပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ - ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်စုံများ ၀ ယ်သည်၊ ထိပ်တွင်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့စေရန်လိုအပ်သောအရာများကိုစလုပ်ပါ။
ကြာသပတေးနေ့ - ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ နှင်းခဲခြင်း၊ ကိတ်မုန့်ဘုတ်ကိုဖုံး။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအေးခဲပေမယ့်အေးခဲမကုန်မှီတိုင်အောင်ကိတ်မုန့်တွေကိုတစ်ညတည်းအေးအေးဆေးဆေးထုပ်ပြီးအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။ (တစ်နာရီခန့်) သူတို့ကုတ်အင်္ကျီတွေကြိတ်လို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့မှာအလှဆင်ဖို့အလွှာမျိုးစုံရှိရင်ငါအလှဆင်ဖို့အချိန်ပိုရနိုင်အောင်အစောပိုင်းကိတ်မုန့် crumb တွေကြိုက်တယ်။
သောကြာနေ့ - buttercream ၏နောက်ဆုံးကုတ်အင်္ကျီကိုလိမ်းပြီးအလှဆင်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာချောကိတ်မုန့်သိမ်းဆည်းထား။ ကျွန်ုပ်သည်ကိတ်မုန့်အမှာစာအတွက်အသုံးပြုသောရေခဲသေတ္တာနှင့်ချိန်ညှိနိုင်သောစင်များမရှိသည့်ပုံမှန်လူနေအိမ်ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုရှိသည်။ Fondant ဖုံးထားသောကိတ်မုန့်များကိုလည်းရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှထွက်လာသောအခါချွေးအနည်းငယ်ထွက်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကိတ်မုန့်ကိုမထိခိုက်ပါ။
စနေနေ့ - ကိတ်မုန့်ပို့ပေးပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အခြားနေ့၌ကြောင့်ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဤအချိန်ဇယားကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့၊ တနင်္လာနေ့ - ကိတ်မုန့်အလှဆင်တနင်္ဂနွေ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်ဖြုန်းဖို့မမေ့ပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်မီးလောင်လိမ့်မယ်! ကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောပျော်စရာကောင်းသည့်အရာများသည်သင့်ကိုယ်သင်အားလပ်ချိန်များမပေးပါကတကယ့်ကိုကြီးမားသော၊ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်မိသားစုနှင့်ကိတ်မုန့်များအလှဆင်ထားသည့်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိပါက။
ကိတ်မုန့်အလှဆင် Tools များ
သင်ဖလားများနှင့်တိုးတိုးများမထွက်ခင်ကိတ်မုန့်အကြောင်းပြောရန်လိုသည် အလှဆင်ကိရိယာများ။ သင်ဤစာရင်းထဲရှိအရာအားလုံးကိုမလိုအပ်သော်လည်းသင်အလေးအနက်ထားလျှင်၎င်းသည်လိုက်နာရန်ကောင်းသောစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးကိတ်မုန့်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မွမ်းမံရမည်နှင့်၎င်းတို့အားမည်သည့်နေရာတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များရှိသည်။
Professional ကိတ်မုန့် - သင်လိုအပ်သည့်အကြွင်းမဲ့နံပါတ် ၁ မှာကောင်းသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်တွင်လောင်ကျွမ်းသောအလယ်၌ပျော့ပျောင်း။ နှစ်ဖက်စလုံးမှမဖြောင့်သောကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အချိန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖြုန်းတီးခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသောအရာမရှိပါ။ ငါသည်ငါ၏ဒေသခံကိတ်မုန့်အလှဆင်စတိုးဆိုင်၌ငါ့ကိတ်မုန့်အိုးကိုဝယ်ပေမယ့်သင်လည်းသူတို့ကိုမီးဖိုချောင် kaboodle သို့မဟုတ် Amazon မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Psssst - Wilton အိုးများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိုးများမဟုတ်ပါ။ (ဝီလ်တန်စိတ်မကောင်း) ။ သင်အလွှာသုံးခုကိုလိုချင်လျှင်အလွှာနှစ်ထပ်ကိတ်မုန့်နှစ်ခုအတွက် ၈″ ကိတ်မုန့်ပြားသို့မဟုတ် ၆″ ကိတ်မုန့်သုံးလုံးလိုအပ်လိမ့်မည်။ (အကယ်၍ သင့်မှာတစ်ခုသာရှိရင်ပထမဆုံးမုန့်ဖုတ်နေတုန်းသင့်ရဲ့ Battery မကောင်းဘူး။ )
offset spatula - သငျသညျနှစ်ခုအရွယ်အစားမလိုအပ်ပါဘူး, သင်ကယ့်ကိုသေးငယ်တဲ့တ ဦး တည်းနှင့်အတူဝေးရနိုင်ပေမယ့်ငါတိုင်းကိတ်မုန့်ပေါ်နှစ် ဦး စလုံးအရွယ်အစားကိုသုံးပါ။ သင်သည် buttercream ၏အလွှာများကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သောကြောင့် offset spatula သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သငျသညျသူတို့ကိုကုန်စုံစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ထောက်ပံ့ရေးစတိုးဆိုင်များမှာအများဆုံးဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ချောဓါး - ဖန်စီဘာမှမ ချွန်ထက်သောဓားကိုမုန့်ဓါးဟုလည်းလူသိများသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့၌သွားအနည်းငယ်မျှသာရှိသဖြင့်၎င်းတို့ကိုလှပချောမွေ့စေရန်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုဖြတ်တောက်ရန်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာဒီဓားရှိတယ်။
Optional ကိတ်မုန့်အလှဆင်ကိရိယာများ (သို့သော်တကယ်ကောင်းသည်)
ခုံတန်းရှည်ခြစ် - ဒါကငါ့နံပါတ် ၁ ဖုတ်တာပဲ။ ငါကိတ်မုန့်နှစ်ဖက်လုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့ရောက်စေဖို့အချိန်တိုင်းအသုံးပြုတယ်။ ငါဒေါ်လာစျေးစတိုးဆိုင်မှာငါ့ဥစ္စာတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့ကိုမီးဖိုချောင်အပိုင်းသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်အလှဆင်စတိုးဆိုင်အများစုကုန်စုံစတိုးဆိုင်များမှာလည်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
စားပွဲတင်လှည့် - သင်ကျိန်းသေတစ် turntable ချင်တာပေါ့။ ကိတ်မုန့်ကိုအရမ်းအေးအောင်လုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး turntable ဟာမိုက်ကယ်ကပလပ်စတစ်နည်းနည်းပဲ၊ ကျွန်တော် ၄၀% ကူပွန်ကိုဝယ်ပြီးဝယ်လိုက်တယ်။ သင့်တွင်ပြားချပ်ချပ်တစ်ခုရှိပါကပျင်းရိသောဆူဆန်ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ကတ်ထူပြားကိတ်မုန့် - ဒါတွေကိုကိတ်မုန့်ပြားဒါမှမဟုတ်ကတ်ပြားလို့လည်းခေါ်တယ်။ သူတို့ကသင်ကသင်၏ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်ပါးလွှာသောပျဉ်ပြားများ ဖြစ်၍ သင့်ကိတ်ကို turntable မှကိတ်မုန့်သို့အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုပန်းကန်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်နိုင်သော်လည်းနှစ်ဖက်လုံးကိုချောမွေ့စေရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ သင်ကလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးသော်လည်းသင်တစ် ဦး buttercream finish ကိုသွားနေလျှင်။ ငါသည်ငါ၏ကိတ်မုန့်ပျဉ်ပြားအံ့သြစရာကနေရပေမယ့်သငျသညျသူတို့ကို Michael သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်အလှဆင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသယ်ဆောင်သောအခြားစတိုးဆိုင်များမှရယူနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အစေးမပါသည့်ချောမွေ့သည့်အစွန်းမျိုးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ပိုက်လိုင်းအိတ် - ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ခါသုံးပိုက်အိတ်တွေကြိုက်တယ်။ သင်၌မရှိသလောက်သို့မဟုတ်မတွေ့ပါက ziplock အိတ်တစ်ချောင်းကိုအစွန်အဖျားဖြတ်ထားသောအိတ်နှင့်သုံးနိုင်သည်။ ငါ Truly Mad Plastics မှငါ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးကုန်စုံစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ဆိုင်မှပိုက်လိုင်းအိတ်များကဒီအတွက်အဆင်ပြေမည်။
ပိုက်ထိပ်ဖျား - သင်ကိတ်မုန့်ထိပ်ပေါ်မှာတော်တော်လေး rosettes ပိုက်ချင်လျှင်ပိုက်အစွန်အဖျားမမေ့ပါနှင့်! ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအရာသည် 2F ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကြယ်ပွင့်မဆို Wilton 1M ကဲ့သို့ပြုလိမ့်မည်။
ဖြန်း - ပါတီကဖျန်းခြင်းလိုမျိုးဘာမှမရှိဘူး။ ကိတ်မုန့်ရဲ့ထိပ်ကိုအလှဆင်ဖို့တော်တော်လေးဖြန်းအချို့ဖမ်းပြီး။ ငါ Fancy Sprinkles ဆီကနေငါရတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကကုန်စုံစတိုးဆိုင်တွေ၊ ကိတ်မုန့်အလှဆင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာမုန့်ဖုတ်တဲ့အတန်းမှာဖြန်းလို့ရတယ်။
ဂျယ်အစားအစာအရောင် - အကယ်၍ သင်၏ buttercream အချို့ကိုအရောင်ခြယ်လိုပါကသင်သည်အစားအစာအရောင်အချို့ (သူတို့ကုန်စုံဆိုင်များတွင်ရောင်းချသောအရည်များမဟုတ်သောအစားအစာမဟုတ်) လိုအပ်သည်။ ငါ Michael မှာကိတ်မုန့်အလှဆင်အတန်းမှာငါ့ဥစ္စာတယ်။ သင်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။
ငါအနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်အပေါ်သင်၌ပါစေပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကခြစ်ရာကနေမုန့်ဖုတ်ပါဘူးသူကိုထွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိတ်မုန့်အလှဆင်အများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တစ်တွေ box ကိုရောနှောအသုံးပြု။ ကပိုခြစ်ကိတ်မုန့်နှင့်တူအရသာစေရန်ကပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ပါ။ ဒါကို Doctored Box ရောနှောလို့ခေါ်ပြီးအရမ်းအရသာရှိတယ်။
လူကြိုက်အများဆုံး doctored ကိတ်မုန့်ရောနှော White Almond Sour Cream Cake ကိုကိုယ်စားပြုသော WASC ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့မူကားအဖြူရောင် box ကိုရောနှောအသုံးပြုရန်မလိုပါ, သင်အဝါရောင်သို့မဟုတ် funfetti box ကိုရောနှောအတူတူချိန်ညှိစေနိုင်သည်နှင့်တူသကဲ့သို့ကောင်းသောအရသာပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ် ဦး ချောကလက် box ကိုရောနှောအသုံးပြုလိုပါကထို့နောက်ချောကလက် WASC ထွက်စစ်ဆေးပါ။
သင်၏ WASC ကို funfetti အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုပါက ၁/၄ ခွက် Jimmy ဖျန်း (ရှည်သောဂျပိန်မျိုး) သို့မဟုတ် confetti ဖြန်းထည့်ပါ။ ကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်ရမည်။
သင့်ရဲ့မီးဖိုကို350ºFအထိအပူပေးပြီးမီးဖိုစင်ကိုမီးဖို၏အလယ်တွင်ထားပါ။ အရမ်းနိမ့်လွန်းလျှင်သင်၏ကိတ်မုန့်၏အောက်ခြေသည်လောင်လိမ့်မည်။ မြင့်မားလွန်းလျှင်ထိပ်လွန်းသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုအလုံအလောက်ပူရရန်မီးဖိုအချိန်ပေးရအနည်းဆုံးမိနစ် 30 ကြာအောင်လုပ်ပါ။
မင်းအိုးကိုအမဲချပါ ငါခေါ်တဲ့အိမ်လုပ်ကိတ်မုန့်ဖြန့်ချိအသုံးပြုချင်တယ် ကိတ်မုန့် အရာလုပ်စူပါရိုးရှင်းပါသည်။ PAM ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဒယ်အိုး၏အတွင်းပိုင်းကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တိုစေသည့်အလွှာပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်၊ အချို့သောအမှုန့်မှုန့်မှုန့်များဖြင့်ဖုန်မှုန့်နှင့်ပိုလျှံသောဂျုံမှုန့်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ သင်နှစ်ဖက်လုံးကိုတက်လမ်းကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို stand mixer ၏ပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ပါ (သို့မဟုတ်သင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်) နှင့်အလတ်စားတွင် ၂ မိနစ်ခန့်ရောမွှေပါ။ သင့်ရဲ့ Battery ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်အိုးများအကြားညီမျှစွာခွဲပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုမီးဖို၌မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အထိဖုတ်ပါ။ သွားဖားတစ်လုံးသည်ကိတ်မုန့်အလယ်မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထွက်လာသည်အထိပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုသူတို့မပြုလုပ်ပါကကြာရှည်စွာမဖုတ်ပါ။ အအေးခံရန်ကိတ်မုန့်အိုးများကိုအအေးခံသိုလှောင်ခန်း (သို့) သင်၏မီးဖိုထိပ်တွင်ချထားပါ။
ကိတ်မုန့်အိုးများကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောအေးမြပြီးတာနဲ့ (15 မိနစ်ခန့်), သင်သည်သူတို့ကိုအအေးထိန်သိမ်းပေါ်သူတို့ကိုဇောက်ထိုးလှည့်နိုင်ပြီးကိတ်မုန့်ချက်ချင်းလဲကြသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကို ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်သာပူနွေးအောင်အအေးခံပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်များသည်ကိုင်တွယ်ရန်အအေးခံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုပလပ်စတစ်ပြားနှစ်လွှာဖြင့်ထုပ်ပြီး ၂ နာရီ (အေးခဲသည့်မုန့်ဖုတ်သည့်နေ့၌သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်လိုပါက) ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲထည့်နိုင်သည်။ တစ်ညအေး ငါအလှဆင်ဖို့တဟုန်တည်းပြေးမရဖြစ်၏ဒါကငါလုပ်ချင်တယ်။ သင်ကထိုနေ့ကိုပင်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ခဲနေသောရေခဲများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူလိုလျှင်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအအေးမခံပါနှင့်။
သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအေးခဲခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသင်သည်သူတို့ကိုမခြိမ်းခြောက်ဘဲချုံ့နိုင်ပြီးကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အေးခဲခြင်းသည်ကိတ်မုန့်အတွင်းရှိထောပတ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးခဲစေသည်။ သို့သော်ကိတ်မုန့်သည်အခန်းအပူချိန်သို့ရောက်သောအခါထပ်မံပျော့ပြောင်းလာလိမ့်မည်။
လွယ်ကူသော Buttercream Frosting လုပ်ခြင်း
ယခုသင့် buttercream ပြုလုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ အစပြုသူများစွာကသူတို့ဟာပါးလွှာသောမုန့်ကိုသုံးချင်သည်ထင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပေါ့ပါး။ ခရင်မ်ဖြစ်သော်လည်းကိတ်မုန့်တစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင်သင်သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမျှမရနိုင်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအရာခပ်သိမ်းရောနှောသို့ပစ်, အဖြူမယ့်သည်အထိပြုပါကတက်ရိုက်နှက်နိုင်သောကြောင့်, ငါ့လွယ်ကူသော buttercream အေးခဲစေရန်ကြိုက်တတ်တဲ့! ဒါဟာစူပါအလင်းင်လည်းချိုမြိန်မဟုတ်ပါဘူး။
Swiss meringue buttercream ကိုကြက်ဥအဖြူ၊ သကြား၊ vanilla အပူဖြင့်အပူပေးသည်။ meringue ထဲသို့နှင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထောပတ်ထဲသို့ထည့်ပြီးအလင်းနှင့် fluffy မတိုင်မီကြာပွတ်ဖြင့်အအေးခံသည်။ ဒီ buttercream ကအမေရိကန် Buttercream လိုမချိုဘူး
အလွယ်တကူ buttercream နှင်းခဲသည်ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲစေပြီးချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့စေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
သင်၏လွယ်ကူသော buttercream ကိုအခန်းအပူချိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်အချိန်အထိပလပ်စတစ်အဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ သင်တစ်ညတည်းထားခဲ့ပါက၎င်းကိုထပ်မံချောမွေ့စေရန်သင်မသုံးမီ၎င်းကိုအနည်းငယ်ကြာအောင်ရိုက်ပါ။
ကျန်ရှိသော buttercream ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိုလှောင်ပါသို့မဟုတ် ziplock အိတ်ထဲတွင် ၆ လကြာအောင်အေးခဲပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုချုံ့ဖို့အချိန်! အနည်းဆုံးတော့သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်အမိုးကိုဖြတ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုသင်၏ turntable ပေါ်တင်ပြီးပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပါ။ ပလပ်စတစ်ထုပ်များကိုကိတ်မုန့်အောက်တွင်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ထားပါ။
အမိုးခုံး၏အောက်ခြေနှင့်ကိတ်မုန့်၏အကြားမျဉ်းကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်သုံးပါ။ မျဉ်းတစ်လျှောက်တွင် ၁/၂ about ခန့်တဖြည်းဖြည်းစတင်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုလှီးပါ။ သင်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပထမဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်အဖြစ် အသုံးပြု၍ အမိုးခုံးထိပ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တောက်ပါ။ သင့်ရဲ့ဓါးကိုကောင်းကောင်း၊ ပြားနေအောင်ထားပါ၊ နှေးလိုက်ပါ။
optionalal - သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအညိုရောင်အနားသတ်ထားပါ
၎င်းသည်အပိုဆုကြေးရွေးစရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချပ်တစ်ခုဟုထင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိတ်မုန့်များမှအညိုရောင်ကိုအမြဲတမ်းချုံ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာလုပ်ဖို့တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်နှင့်လည်းကိတ်မုန့်ကိုအနည်းငယ်အနည်းငယ်သေးငယ်စေသည်ဒါကြောင့်သင်ကသင်၏ buttercream မှတဆင့်အညိုရောင်ပြပွဲရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းနည်းသည်။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုဇောက်ထိုးလှည့်ပါ။ အောက်ခြေကထိပ်ဆုံးမှာပါ။ သင်၏ဓါးကိုအညိုရောင်“ အသားအရေ” အောက်သို့တွန်းချပြီးအပိုင်းအစတစ်ခုထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက်သင်၏ဓားကိုကောင်းမွန်ပြီးပြားအောင်ထားပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးကိုအတူတူလုပ်ပါ။
ငါတို့ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုစတင်စုဆောင်းဖို့အချိန်! သင်၏ကိတ်မုန့်ဘုတ်ကို turntable ပေါ်သို့တင်ပြီး၎င်းကိုဗဟိုပြုပါ။ သေးငယ်တဲ့ dollc buttercream ကိုဘုတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးသင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်အလွှာကိုဘုတ်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။ ကိတ်မုန့်နှင့်ဘုတ်အကြား၌သင်၏ကိတ်မုန့်ပတ်ပတ်လည်တွင်နေရာအနည်းငယ်ရှိသင့်သည်။
အလွှာထိပ်ပေါ် buttercream ၏ dollop ကြီးတစ်ခုကို ထား၍ သင်၏ offset spatula ကို သုံး၍ buttercream ကိုကိတ်မုန့်စွန်းသို့တွန်းပို့ပါ။ ထို့နောက်လှံတံကို45ºထောင့်ဖြင့်ကိုင်။ buttercream ၏အလယ်တွင်အစွန်အဖျား ရှိ၍ ကိတ်မုန့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပါ။ buttercream အလွှာသည်သင်၏ spatula အဆင့်ကိုထိန်းထားပါ။
ငါအခါအားလျော်စွာဗဟိုထဲမှာအမိုးခုံးရှိတယ်သို့မဟုတ်ပါကကောင်းတဲ့နှင့်ပြားချပ်ချပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် buttercream နှင့်အတူမျက်စိအဆင့်အထိဆင်းပါလိမ့်မယ်။ တစ် ဦး ကပြားချပ်ချပ်ကိတ်မုန့်တည်ငြိမ်သောကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ - သင်၏ကိတ်မုန့်ကို Strawberry Puree နှင့် Strawberry Buttercream တို့ဖြင့်ဖြည့်ပါ
သင်သည်သင်၏အဆာဖြည့်စွတ်ချင်လျှင်, သင်တစ် ဦး စတော်ဘယ်ရီ puree ကဲ့သို့သင်၏ buttercream အချို့အရသာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုစတော်ဘယ်ရီရွက်နှင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကအလွန်ပါးလွှာသောအလွှာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏စတော်ဘယ်ရီစင်ကြယ်သောစာရွက်ကိုသုံးနိုင်သည်သို့သော်သင်လတ်ဆတ်သောအသီးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ကိတ်မုန့်အတွက်ထောပတ်အအေးဖြစ်သောကြောင့်ကိတ်မုန့်အရသာဖြစ်စေနိုင်သည့်အစဉ်အမြဲရေခဲသေတ္တာခံရဖို့ရှိသည်။
မုန့်ဖိုတွေအများကြီးသုံးတဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီအဆာကိုငါကြိုက်တယ်။ သင်သည်သင်၏ buttercream ထဲသို့အနည်းငယ်ရောနှော။ အရသာဖြစ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ကိတ်မုန့်အလွှာများပေါ်တွင်အနည်းငယ်ဖြန့်နိုင်သည်။
ထိုအခါငါထိပ်ပေါ်မှာစတော်ဘယ်ရီ buttercream ၏အလွှာထားပါ။
သင့်ရဲ့နောက်ထပ်ကိတ်မုန့်အလွှာထည့်ပါ။ သငျသညျ 6″ အလွှာကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်သင်ဖြည့်စွက်ရန်အလွှာနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်, သင် 8″ ကိတ်မုန့်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်သင်သာတစ်ခုတည်းသောအဆာတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကိုအဆင်ပြေတယ်!
ကြောင်းဒါ yummy ကြည့်ရှုမထားဘူး ??
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့် Crumbcoat ရန်
သငျသညျသို့မဟုတ်တစ် ဦး crumbcoat အကြောင်းကြားကြပြီမပြုစေခြင်းငှါပေမယ်သင်ယူမှု၏မျက်နှာကိုထောက်။ ငါကရှင်းပြဖို့သွားမယ်။ ငါတစုံတခုကိုကျော်သွားဖို့မသွားခဲ့သည်ကိုသင်ပြော!
ဂျုံမှုန့်သည်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်သင်၏ buttercream ၏ပါးလွှာသောအလွှာဖြစ်ပြီးအစအနတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ သင်သည်ဤ buttercream နှင်းခဲ၏နောက်ဆုံးအလွှာတွင်ထိုအစအနများကိုမရရှိနိုင်စေရန်အရေးကြီးသည်။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ထိပ်ပေါ်မှာ buttercream အရုပ်ကြီးတစ်ခုထားပြီးသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်တစ်လျှောက်မှာ buttercream ကိုပါးလွှာတဲ့အလွှာအဖြစ်ဖြန့်ဖို့သင့်ရဲ့ offset spatula လေးကိုသုံးပါ။ သငျသညျပါးလွှာသောကုတ်အင်္ကျီပြုလိမ့်မည်, သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သပ်ရပ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သငျသညျလုံးဝ ok ရဲ့, buttercream ၏ဤအလွှာ၌စတော်ဘယ်ရီ၏အစအနများနှင့်တုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအပြည့်အဝဖုံးအုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအေးခဲစေရန်ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ အဆိုပါ buttercream ထိတွေ့မှခိုင်မာတဲ့ပြီးတာနဲ့သင် crumbs ထဲသို့ဝင်မပါဘဲသင်နောက်ဆုံး buttercream ၏အင်္ကျီကိုတင်နိုင်ပါတယ်။
အခုငါတို့ buttercream ရဲ့နောက်ဆုံးကုတ်အင်္ကျီကိုငါတို့ကိတ်မုန့်ကိုယူသွားမယ်။ သင့်ရဲ့ပိုကြီးတဲ့ offset spatula ကိုသုံးပြီးကိတ်မုန့်ထိပ်ကိုနှင်းခဲအချို့ကိုသုံးပြီးကိတ်မုန့်အကြား buttercream အလွှာများကိုချောချောမွေ့မွေ့နည်းတူချောမွေ့စွာချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အခုတော့ကိတ်မုန့်နှစ်ဖက်မှအချို့သောနှင်းခဲလျှောက်ထားပါ။ ကောင်းတဲ့အထူအင်္ကျီကိုလုပ်ပါ။
အခုတော့ပျော်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလာပါတယ်။ အလွန်အကျွံနှင်းခဲကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်ခုံတန်းရှည်ခြစ်ကိုသုံးပါ။ ပိုလျှံပြန်ပန်းကန်ထဲသို့သုတ်။ ခြစ်ခြစ်ကိုစားပွဲပေါ်သို့ခြေရင်းနှင့်အတူဖြောင့်။ အပေါ်နှင့်အောက်ထားပါ။ သင်ဘုတ်အဖွဲ့သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အစက်အပြောက်များရှိပါက buttercream ထပ်မံထည့်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှချောမွေ့သည်အထိခြစ်ပါ။
သင့်ရဲ့သေးငယ်တဲ့ offset spatula ကိုသုံးပါနှင့်အပြင်ဘက်အစွန်းကနေဗဟိုဆီသို့ချောချောမွေ့မွေ့ရွေ့လျားမှုဖြင့် buttercream ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲယူခြင်းအားဖြင့်ထိပ်အစွန်းကိုရှင်းလင်းရန်။
ယခုသင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်နိုင်! ဒါကငါတို့ကိတ်မုန့်ကိုတည်ဆောက်ပြီးအေးခဲအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခုအလွယ်ဆုံးအပိုင်းပဲ။ သင်၌ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းသောပတ္တူရှိသည်။
ကျွန်တော့်ကိတ်မုန့်အတွက်ပန်းကန်ပြားကြီးတစ်လုံးထဲဖြန်းဖြန်းဖြန်းခနဲကျွန်တော့်ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်ဘက်လက်မှာကိုင်ထားလိုက်တယ်။ ငါ့လက်ျာလက်ဖြင့်ငါအချို့ဖြန်းတက် scooped နှင့်ပိုလျှံပြန်ပန်းကန်ထဲသို့ကျစေခြင်းငှါ, ကိတ်မုန့်၏နှစ်ဖက်မှဖိလေ၏။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်ကကောင်းလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်ကိတ်မုန့်၏ထိပ်များအတွက်အချို့သောတော်တော်လေး rosettes ပိုက်ကြကုန်အံ့။ ကျွန်ုပ်၏ပိုက်ခေါင်းကိုကျွန်ုပ်၏ပိုက်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအိတ်၏အဆုံးကိုဖြတ်လိုက်သည်။ အလွန်အကျွံမဖြတ်ပါနှင့်သို့မဟုတ်ပိုက်အစွန်အဖျားအိတ်ထဲကလဲကျလိမ့်မည်။
သင်၏ buttercream ကိုအရောင်ခြယ်လိုပါကကြီးမားသောကျူကောင်တစ်ချောင်းကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးသင်၏အရောင်အရောင်တစ်စက်ထည့်ပါ။ မဆို Streak ကျန်ကြွင်းသည်အထိတစ် ဦး spatula နှင့်အတူရောမွှေပါ။
ထို့နောက်အိတ်ကိုခွက်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအနားထားပါ။ ဤအရာသည်လွယ်ကူစွာ buttercream အချို့ကိုအိတ်ထဲသို့ထည့်ရန်လွယ်စေသည်။ သင်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။
rosettes ကိုပင်ပိုက်ခြင်းအတွက်, ပထမ rosette ကိုငါပိုက်ပြီးနောက်90ºကိုလှည့်ပြီး rosette သည်ငါ့ထံမှတိုက်ရိုက်ဖြတ်သည်။ ထိုအခါငါငါ၏ဒုတိယပိုက်။ ထိုအခါငါကိတ်မုန့်45ºကိုလှည့်ပြီးအတူတူပါပဲလုပ်သည်၊ အခြေခံအားဖြင့်ပထမနှစ်ခု rosettes အကြားတိုက်ရိုက်ပိုက်ပြီးနောက်တစ်ဖက်တွင်လည်းအတူတူလုပ်သည်။ ထိုအခါငါနှစ်ခုနောက်ထပ် rosettes နှင့်အတူအကြားအာကာသဖြည့်ပါ။ ထိုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ rosettes အားလုံးသည်အရွယ်အစားတူတူပင်တူညီကြသည်။
မင်းရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုတရားဝင်အလှဆင်ပြီးပါပြီ။ သွားလိုက် !! မင်းလုပ်နိုင်တာငါသိတယ်
မင်းကကိတ်မုန့်တစ်လုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေ့လာရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်ကိုချန်ထားပါ။ သင်ဟာငါတို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့ ၀ င်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကိတ်မုန့်တွေတင်လိုက်တာကိုတွေ့ရတော့ ၀ မ်းသာပါတယ်။
နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကတော့ငါမပို့ခင်ကိတ်မုန့်တွေကိုများသောအားဖြင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိုထားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကောင်းကောင်း၊ မြဲမြံနေတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဝေးဝေးမဝေးသေးဘူး၊ သိပ်ပူရင်တော့ကိတ်မုန့်တွေကအခန်းအပူချိန်မှာပိုကောင်းတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမုန့်ဖုတ်သမားများကောင်းစွာအသုံးပြုသောအရသာရှိသောအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်ကိုခြစ်ရာအလားနီးပါးအရသာရှိသောထုတ်လုပ်ထားသောကိတ်မုန့်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤစာရွက်သည် ၆'x2 'ကိတ်မုန့်သုံးခုသို့မဟုတ် ၈'x ၂' ကိတ်မုန့်သုံးခုကိုပြုလုပ်သည် ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ612kcal
▢၁ သတျတော အဖြူကိတ်မုန့်ရောနှော ငါ duncan က hines ကြိုက်တယ်
▢၁ ခွက် AP ဂျုံမှုန့်
▢၁ ခွက် ဒိန်ချဥ် အခန်းအပူချိန်
▢1/2 ခွက် အရည်ကျိုထောပတ်
▢၄ ဥအဖြူ လတ်ဆတ်တဲ့အခန်းအပူချိန်မှာသေတ္တာဘူး
▢၁ Tsp ဗာဒံသီး
▢၁ ခွက် Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ ၈ အောင်စ
▢နှစ် ပေါင် သကြားမှုန့် ၃၂ အောင်စ
▢နှစ် ပေါင် unsalted ထောပတ် 32 အောင်စအခန်းအပူချိန်ပျော့
▢၁ Tbsp vanilla ထုတ်ယူ
▢1/4 ခွက် စတော်ဘယ်ရီသန့်စင် မလုပ်မနေရ
သင့်မီးဖိုကိုကောင်းမွန်စွာအပူပေးရန်သင်၏မီးဖိုအချိန်ကိုမဖုတ်မီအနည်းဆုံးမိနစ် (၃၀) တွင်သင့်မီးဖိုအား350ºFအထိကြိုတင်အပူပေးပါ။ သင်၏ဖန်ခွက်များကိုကိတ်မုန့် (သို့) အခြားနှစ်သက်ဖွယ်ဒယ်အိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။
ဒီကိတ်မုန့်အတွက်ညွှန်ကြားချက်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးအလယ်အလတ်မြန်နှုန်းဖြင့် ၂ မိနစ်ရောစပ်ပါ။ Voila! ကိတ်မုန့် Battery ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Battery ကိုသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အိုးတွေထဲကိုအညီအမျှခွဲထားပါ။ ၃၅ မှ ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာသောမုန့်များကိုဖုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်သွားထည့်ထားသောသွားတစ်ချောင်းသည်သန့်ရှင်းလာသည်အထိမဖုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်တွေကိုသူတို့မပြီးသေးဘူးဆိုရင်ပိုကြာကြာဖုတ်တာကောင်းပါတယ်။
သကြားဖျက်သိမ်းသည်အထိ pastuerized ကြက်ဥလူဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားကိုအလယ်အလတ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူရောနှောပါ။ ၂ မိနစ်လောက်။
အဆိုပါ buttercream မြည်းစမ်း။ ၎င်းသည် buttery အရသာသို့မဟုတ်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်သောအရသာရှိနေလျှင်ဆက်ပြီးရောစပ်ပါ။ ဒီ buttercream ကိုလွန်စွာမဖြတ်နိုင်ပါ
သေတ္တာ၏နောက်ကျောတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤစာရွက်သည် 6'x2 'ကိတ်မုန့် (သို့) ၈'x2' ကိတ်မုန့်သုံးလုံး (ပတ်ပတ်လည်) အတွက်လုံလောက်သော Battery ကိုပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်မင်ကိတ်မုန့်တစ်ဘူးလျှင် ၁.၅ အောင်စခန့်ပါသောကိတ်မုန့် ၃၆ လုံးပြုလုပ်သည်။ ဆန္ဒရှိပါကကြက်ဥအဖြူ ၄ လုံးကိုဥသုံးလုံးလုံးနှင့်အစားထိုးနိုင်သည် အကယ်၍ သင်၏ထောပတ်သည်အေးလွန်းသောကြောင့်သင်၏ထောပတ်သီးခေါက်သည်ဆိုပါက ၁/၂ ခွက်နှင်းခဲကိုထုတ်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင် ၁၅ စက္ကန့်ခန့်အရည်ပျော်ပါ။ အတူတူပြန်အရောအနှောကိုယူ။ က creamy စေရန်ရေခဲထဲသို့ပြန်ရောမွှေပါ။ ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများစာရင်း အကြံပြုထားသောကိရိယာများ * မှတ်စု - ဤစာရင်းတွင်သင့်အားမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှမပေးပါသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရောင်းရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့မည့်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ *
ခြစ်ရာကနေအဘယ်သူမျှမ gelatin ထံမှစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်စာရွက်
ဗာဒံငါးပိနှင့် marzipan အကြားခြားနားချက်
တစ် ဦး muffin icing မပါဘဲမယားစကားဖြစ်ပါတယ်